Apple Kutengesa kutengesa kwakawedzera 51% mukati mekota yekupedzisira | Ndinobva mac
Apple Watch kutengesa kwakawedzera 51% mukati mekota yekupedzisira
Kubva Cupertino ivo havana kubvira vazivisa zviri pamutemo huwandu hweApple Watch yavakaisa pamusika kubvira chizvarwa chekutanga chakatangwa muna 2015, sekusina kunge yakazivisa huwandu hweAirPods dzakatengeswa. Izvi zvinopa vaongorori basa rekuwedzera, avo vanofanirwa kurarama kuti vazive.
Sekureva kwevakomana pa Strategy Analytics, Apple yakatumira angangoita mamirioni 6.8 Apple Watch mukota yechitatu ya2019, Yechina mari yechina yeApple uye yainovhara gore 2019. Zvinoenderana nekambani iyi, nhamba iyi inomiririra kuwedzera kwe51% zvichienzaniswa nenguva imwechete yegore rapfuura.
Kutenda nekuwedzera uku mukutengesa kweApple Watch, Apple haina kungokwanisa chete kuchengetedza chinzvimbo chekutanga mumusika, asi yakawedzerawo mugove wayo wemusika, kubva pa45% iyo yaive nayo panguva ino muna 2018 kusvika pa47,9% iyo yazvino.
Kubva kune vamwe vese vagadziri, Samsung yakawedzerawo mugove wayo wemusika, chimwe chinhu icho Fitbit isina kuwana, sezvo yadonhedza mapoinzi mana. Iwo mana mapoinzi akagovaniswa pakati peSamsung neApple zvakaenzana.
Asi kutengesa kweApple Watch hakusi iko kwega kwakawedzera munyika yemawatchwatches uye zvishongo zvequantifier, vamwe vese vanokwikwidza vakaita saSamsung naFitbit vakaonawo kuwanda kwenhamba yemidziyo ayo akaiswa mukutenderera mukati mekota yechitatu ye2019, kunyangwe chikamu chekupedzisira chakadzikira.
Vhiki rapfuura Google's Fitbit enzaniso yakasimbiswa, mukufambisa kwakonzera huwandu hwakawanda hwekufungidzira, nekuti hapana anoziva zvirongwa izvo hofori yekutsvaga ine iyi kambani. Hatizive kana vachizoramba vachimisikidza mamodheru matsva neFitbit's pachayo sisitimu yekushandisa, kutora Wear OS, kuchengeta zvibvumirano uye kutengesa kambani kana zvicharamba zvakaita sepakutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Watch kutengesa kwakawedzera 51% mukati mekota yekupedzisira
Chinja mafaera eMKV kuita MP4 neyemahara MKV2ATV app
Apple TV + inofumura kumashure-kwe-zviitiko vhidhiyo yeayo "Ona" akateedzana